Ny orinasam-pifandraisan'ny daholobe dia vonona hampiasa media sosialy | Martech Zone
Zoma, Aogositra 21, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Miaraka amin'ny lahatsoratro farany mamono an'i Brody PR, mety hieritreritra ianao fa bandy media sosialy mankahala ny orinasan'ny PR. Tsy lavitra ny fahamarinana izany. Ho toy ny namoaka lahatsoratra bilaogy mora foana momba ny masoivohon'ny media sosialy aho raha nanao zavatra mitovy amin'izany.
Kyle Lacy no naka an'io a mandroso lavitra, manambara,
Raha tsy manoratra, miteny ary mampianatra ny mpanjifany amin'ny fomba fampiasana media sosialy ho an'ny fitantanana marika na serasera ny orinasam-pifandraisanao? mandroaka azy ireo eo noho eo.
Amin'ny fanajana rehetra, tsy manaiky an'i Kyle aho.
Ny ady dia tsy misy eo amin'ny Fifandraisan'ny daholobe sy ny haino aman-jery sosialy, mbola manome lanja ny fahaiza-manao izay entin'ny Fifandraisana amin'ny besinimaro aho. Tsy misy manam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialy (ary hihaika azy rehetra aho) vonona hanararaotra ireo fitaovana ireo kokoa noho ny maso ivoho PR izay mahatakatra ny fomba fifampiresahana mahomby sy amin'ny fananganana paikad-pifandraisana amin'ny besinimaro, miasa sy ivelan'ny Internet.
Ny zavatra iray izay manadino adino hatrany ry zalahy haino aman-jery sosialy dia ny vitsy an'isa. Ny fifandraisana amin'ny daholobe no bandy be - mbola manintona ny tadiny ary mametraka ny feo ho an'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany. Ireo orinasam-pifandraisana dia mbola manohy mahazo vokatra tsara ho an'ny orinasany ary fampiasam-bola lehibe ho an'ny orinasa. Ny orinasam-pifandraisam-bahoaka dia ampianarina amin'ny fomba ofisialy amin'ny fifandraisana mahomby, fampitaovana, tetika sns.
Heveriko fa marina fa ny Social Media posse dia mazàna manitatra loatra ireo mpampita vaovao sy ny maha-zava-dehibe antsika. Ireo mpivarotra lehibe niasa tamin'ny varotra mivantana, mail mivantana, marketing amin'ny tahiry ary famoahana izay nandray ny haino aman-jery sosialy dia tia miasa eo amin'ny habakabaka satria mora ampiasaina, mora refesina, ary tsy lafo ny manova ny lalana amin'ny sidina.
Ny ady eo amin'ireo orinasam-pifandraisan'ny besinimaro dia mila mandeha amoron-dalana ary ireo lehilahy media sosialy toa ahy sy i Kyle dia mila mamihina azy ireo, manampy azy ireo ary mianatra avy amin'izy ireo. Manantena ny hampianatra ny orinasan'ny PR amin'ny media, automatisation ary fandalinana azon'ny haino aman-jery sosialy omena aho, indray mandeha azoko, ho tian'izy ireo ny valiny mety ho azony avy amin'izany sy ny fahafaham-po omeny avy hatrany.
Izay ny 2 cents-ko momba ny Fifandraisam-bahoaka sy ny haino aman-jery sosialy!
Sarin'i Kyle avy amin'i Kyle Weller.
Tags: Kyle Lacyprfifandraisana amin'ny vahoakahaino aman-jery sosialy
Manatsara ny Permalinks WordPress
21 Aogositra 2009 amin'ny 8:58 PM
Mahafinaritra ilay sarin'i Kyle! Haha.
Manaiky aho. Sasatry ny mandany ny "olona media sosialy" mandany fotoana be loatra aho handresy lahatra ny olon-drehetra fa sarobidy ny media sosialy. Tokony ho fantatry ny olona dieny izao. Indraindray dia toy ny hoe mihetsika miaro tena isika alohan'ny hanomezan'ny olona iray fanoherana ny fampiasana media sosialy. Handany fotoana bebe kokoa amin'ny fandresen-dahatra aho ary amin'ny fotoana bebe kokoa hanomezana valiny ho an'ireo izay efa nanokatra ny masony.
21 Aogositra 2009 amin'ny 5:24 PM
Voalohany, misaotra anao nampiasa ity sary ity. Izy io dia iray amin'ireo harena miafina ao amin'ny sary vaovaon'ny sary. Faharoa, tiako ny hampiharihary mazava tsara fa tsy manohitra ny fifandraisam-bahoaka mihitsy aho. Mino aho fa mbola mitana andraikitra lehibe amin'ny paikadin'ny fifandraisana ny pr. Miezaka fotsiny aho milaza fa raha tsy manadihady ny mety hampiasa ny media sosialy ny orinasanao amin'ny fifandraisana dia tsy manao ny rariny tanteraka amin'ny mpanjifany izy ireo. Betsaka ny orinasa any toy ny Blast Media any Indianapolis izay mampiasa media sosialy amin'ny fomba mety. Tokony hanaiky ny Internet ianao raha te hanana fifandraisana izay tena manandanja tokoa. Izahay dia manandrana mitazona ny olona ho tompon'andraikitra fotsiny.
Lahatsoratra tsara, Doug. Miala tsiny aho raha misy tsipelina diso apetraka amin'ny iPhone.
21 Aogositra 2009 amin'ny 9:47 PM
Ilaina ny adihevitra tsara eo amin'ny PR eo alohan'i Kyle. Ary navelako hanana an'io lahatsoratra farany io i Brody ka te-hanavotra kely ny tenako aho.
Sary mahafinaritra! Nahita milay hafa ihany koa aho…. indrindra ilay iray miaraka aminao nofonosina tamin'ny tongotry ny zazavavy… mamirapiratra. Saika nampiasaiko! Mahafinaritra ny sary Google!
21 Aogositra 2009 amin'ny 9:26 PM
Nahazo aingam-panahy aho hanomboka bilaogy tsara mitondra ny lohateny hoe "Lesona ianarana" mba hahazoan'ny hafa tombony. Misaotra anao namela ahy hampiditra ny teny nindraminao. Ity misy rohy mankany amin'ilay lahatsoratra, http://brodypr.blogspot.com/
Ankasitrahako ny hevitrao.
21 Aogositra 2009 amin'ny 5:33 PM
Robby. Tsy ho diso fanantenana mihitsy ianao. Mbola mieritreritra aho fa tokony hiady hevitra amin'ny tenanao ianao. 🙂
21 Aogositra 2009 amin'ny 9:29 PM
Toy izao ny famaritan'ny Public Relation Society of America (PRSA) ny PR:
Ny fifandraisana amin'ny daholobe dia andiam-pitantanana, fanaraha-maso ary fiasa ara-teknika izay mampiroborobo ny fahafahan'ny fikambanana mihaino, mankasitraka ary mamaly ireo olona manana fifandraisana mahasoa miaraka amin'ny fikambanana raha te hahatratra ny iraka sy ny soatoavina.
Ity famaritana ity dia azo heverina fa malalaka. Midika izany fa ny PR dia natao "hampiroborobo ny fifandraisana stratejika" amin'izay olona manan-danja amin'ny fikambanana. Saingy tsy azonao tratrarina beso ity tanjona ity. Ny mpiasa rehetra, ny mpanjifa rehetra, ny olona tsirairay dia manana fahefana hiresaka momba ny orinasanao isaky ny maniry izy ireo. Ny orinasan'ny PR dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fahitan'ny besinimaro tamin'ny alàlan'ny famoronana hafatra tamim-pitsarana tamin'ny haino aman-jery. Ny fiakaran'ny feo isam-batan'olona amin'ny endrika haino aman-jery sosialy dia tranga iray tsy azo sakanana. Ny orinasa iray dia tsy afaka manantena hampiasa manam-pahaizana momba ny PR mba hifandray amin'ny olona an-tapitrisany tsirairay.
Tsy midika izany fa tsy misy lanjany ny PR. Raha tsorina, io PR io amin'ny maha "function stratejika" azy dia tsy misy lanjany afa-tsy amin'ny tontolo izay anjakan'ny haino aman-jery marobe ny hevitry ny besinimaro. Mbola miaina eo amin'ity tontolo ity isika fa maty vetivety. Rava avokoa ireo tambajotran-televiziona, onjam-peo ary gazety manerana ny toerana.
Ny tena zava-dehibe dia ny fahafantaran'ny PR fa tsy mahomby izy io. Araka ny Edelman 2009 Trust Barometer (http://www.edelman.com/trust/), ”Target =” _ blank ”> www.edelman.com/trust/), 77% amin'ireo orinasa matoky ny amerikana Kely kokoa herintaona lasa izay. Notaterin'izy ireo ihany koa fa ny 26% amintsika ihany no tena matoky ny fanambarana an-gazety ataon'ny orinasa. Ary raha ny fanazavana - Edelman no orinasa PR lehibe indrindra eto an-tany!
Raha tsy mahazo afa-tsy 1/4 amintsika hitoky azy ireo ny vahoaka PR dia tsy maintsy ratsy toetra ratsy amin'ny asany izy ireo. Alao an-tsaina raha 1/4 ny namanao sy ny fianakavianao fotsiny no natoky anao. Angamba ny fomba mety hanorenan'ny orinasa fifampitokisana sy hifandraisana amin'ny olona tsirairay dia tsy amin'ny alàlan'ny fanangonana am-pitandremana ireo olona PR, fa amin'ny alàlan'ny famporisihana ireo mpiasa hiresaka amin'ny olona ny zava-mitranga. Mety hanangana fifandraisana ilaina izany, fa tsy mihorona iray mihodina.
Aug 22, 2009 amin'ny 5: 17 AM
heveriko fa ny fifandraisana amin'ny besinimaro dia mitana andraikitra lehibe ary tena mila izany koa. fanehoan-kevitra maro no eto raha te hanao adihevitra. miombon-kevitra tanteraka amin'izy ireo aho fa tokony hisy ny adihevitra momba io lohahevitra io. mety afaka manomboka ady hevitra eto amin'ity lahatsoratra ity ihany koa isika amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra ihany koa. mba hisian'ny adihevitra fohy eo amintsika rehetra… tsara ny lahatsoratra ary koa ny sary .. mirary soa
Aug 25, 2009 amin'ny 6: 02 AM
Raha jerena ny habetsaky ny hafatra ara-barotra (izay 90% dia fako) izay iharan'ny fanararaotana ataon'ny mpanjifa sy ny orinasa, dia ara-drariny ny manantena ireo misalasala raha tena miasa amin'ny orinasany tokoa ny media sosialy. Raha tsy mirona amin'ny demografika ao amin'ny media sosialy ny vokatrao dia mila ezaka be ny misintona zavatra, indrindra raha bandy kely manana marika tsy fantatra ianao.
Sep 23, 2009 ao amin'ny 7: PM PM
Tara kely amin'ny fety, saingy nandefa an'i Doug tsara (sy ilay nanetry tena tamin'io-mahavelombelona hitan'ny iray amin'ireo manam-pahaizana io). Ekeko fa mila esorina ny fifandirana; misy fotoana mety tsara any. Miala tsiny aho aloha fa somary nanompo tena ianao, fa izahay (RSW / US) vao nahavita fanadihadiana, ny fomba fijerin'ny Agencies sy ny mpanjifa momba ny tontolon'ny sosialy / dizitaly, izay mifanaraka tsara amin'ny lahatsoratranao. Manokana, iray amin'ireo fikarohana:
Amin'ireo fitsipi-pifehezana roa amin'ny serivisy voalohany, dia hita fa manana ny toerany ny PR Firms raha ny fahaizany / traikefa ananany amin'ny fitantanana ny fandrefesana ny media sosialy. 60% n'ny PR Firms dia milaza fa mandrefy ny haino aman-jery sosialy izy ireo raha ampitahaina amin'ny 49% fotsiny amin'ny Agencies Ad sy 45% an'ny mpivarotra.
Tsarovy fa ity data ity dia somary tsy mandeha amin'ny laoniny, fa azonao atao ny misintona ny fanadihadiana eto: http://www.rswus.com/main/indexsurvey.php Manantena ny hanaraka ny bilaoginao.
Sep 24, 2009 amin'ny 2: 51 AM
Fanadihadiana mahafinaritra ity ary nozaraiko tamin'ny mpanjifa sy mpiara-miasa vitsivitsy! Misaotra betsaka tamin'ny fizarana azy.